uthenge i-Etravirine powder (269055-15-4) hplc =98% | Ukurhoxisa iR & D Reagents
/ iimveliso / IiReagents zeR & D / Etravirine powder
SKU: 269055-15-4. Udidi: IiReagents zeR & D
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-Etravirine powder (269055-15-4), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Etravirine yinkqubo yokukhusela i-anti-antibiotic (anti-antibiotics) eyenza ukuba iifestile ze-anti-immunodeficiency virus (HIV) zisuke zanda emzimbeni wakho. I-Etravirine isetyenziswe ngamanye amayeza ukunyanga i-HIV kubantu abadala kunye nabantwana abangenani ubuncinane be-6 ubudala. I-HIV ibangela i-immunodeficiency syndrome (AIDS). I-Etravirine ayiyonyango yeHIV okanye AIDS.
Etravirine powder ividiyo
Etravirine powder ezisisiseko
igama: Etravirine powder
I-molecular Formula: C20H15BrN6O
Isisindo somzimba: 435.284
I-Raw Etravirine powder ekusebenziseni
Amagama amabakala: Intelence
Igama loGeneric: I-Etravirine powder (Ukubizwa: I-EIR VIR een)
Etravirine Ukusetyenziswa kwePowder
I-Etravirine powder yile mithi yonyango esetyenziselwa ukudibanisa namanye amayeza ukunyanga igciwane lesandulela ngculazi (HIV) kubantu abaneminyaka engama-6 ubudala ubudala. I-Etravirine powder isetyenziswe xa amanye amayeza angaphumelelanga. I-Etravirine powder luhlobo lonyango lwe-HIV olubizwa ngokuba yi-non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI). Isebenza ngokumisa i-HIV ukuhlula nokusabalalisa.
La mayeza aya kwifomati yefomati kwaye idla ngokuphindwa kabini imihla ngemihla, emva kokutya. I-Etravirine powder kufuneka igxinwe ngokupheleleyo ngeglasi yamanzi.
Iziphumo eziqhelekileyo ziquka ukubetha, ukuphazamiseka, okanye intlungu ezandleni okanye ezinyaweni, kunye nehudo.
Iyiphi imilinganiselo ye-Etravirine powder
Ukusetyenzwa koMntu omdala weNtsholongwane kaGawulayo
200 mg ngomlomo kabini ngosuku emva kokutya
Ukusetyenzwa kweNtsholongwane yezilwanyana kwiNtsholongwane kaGawulayo
6 ukuya ngaphantsi kweminyaka eyi-18:
I-16 kg ukuya ngaphantsi kwe-20 kg: 100 mg ngomlomo kabini ngosuku emva kokutya
I-20 kg ukuya ngaphantsi kwe-25 kg: 125 mg ngomlomo kabini ngosuku emva kokutya
I-25 kg ukuya ngaphantsi kwe-30 kg: 150 mg ngomlomo kabini ngosuku emva kokutya
30 kg okanye ngaphezulu: 200 mg ngomlomo kabini ngosuku emva kokutya
Akukho luhlengahlengiso olucetyiswayo.
Ukukhubazeka kwe-hepatic enobukhulu okanye ephakathi (i-Child-Pugh Class A okanye i-B): Akukho lungiso olucetyiswayo.
Ubunzima bokuphazamiseka kwe-hepatic (Child-Pugh Class C): Iinkcukacha azifumaneki
I-Etravirine i powderine isebenza njani
I-Etravirine powder isetyenziswe kunye namanye amayeza ukuphatha intsholongwane ebangelwa igciwane lesandulela ngculazi (HIV). Intsholongwane kaGawulayo yintsholongwane eyenza i-AIDS (AIDS) ifumaneke. Eli gama lisoloko linikezelwa kwizigulane ezithole unyango lwe-HIV ngexesha elidlulileyo.
I-Etravirine powder ayiyi kunyanga okanye inqande ukusuleleka ngu-HIV okanye i-AIDS; nangona kunjalo, kunceda igciwane lesandulela ngculazi ukuba lizalise kwaye libonakala liphucotha ukutshatyalaliswa kwesistim somzimba. Oku kunokuncedisa ukulibazisa ezinye zeengxaki ezinxulumene ne-AIDS okanye isifo se-HIV. I-Etravirine powder ayiyi kukugcina ukusasaza i-HIV kwabanye abantu. Abantu abathabatha eli liyeza banokuqhubeka befumana ezinye iingxaki eziphathelele kuGawulayo okanye isifo se-HIV.
Ubukhulu, ubunobungozi bokuphila, kunye nokuguquka kwesikhumba esibulalayo kwenzeka. Ukuphendula kwe-Hypersensitivity (ezibonakaliswe ngokukhawuleza, ukufunyanwa komgaqo-siseko, kunye nezinye izigandysfunction, kubandakanywa nokuhluleka kwesibindi) nazo ziye zabikwa. I-Rash isenzeka kakhulu kwiiveki ze-6 zokuqalisa unyango. Ukuba iimpawu okanye iimpawu zempatho zesikhumba okanye ukuphendula kwe-hypersensitivity ziphuhlise, u-Etravirine unyango lwe-powder kufuneka unqunywe kanye, i-clinical status (kubandakanya i-transaminases yesibindi) kufuneka ihlolwe, kwaye kufuneka kuqaliswe unyango olufanelekileyo. Ukukhawuleza ukuyeka u-Etravirine powder emva kokuqala kokugqithisa okukhulu kunokubangela ukusabela kokusongela ubomi.
I-Etravirine ipowder inakho ukusebenzisana neziyobisi ezininzi ezibangelwa ukuguqulwa kwiplasma nakwezinye iziyobisi okanye nge-Etravirine powder. Izigulane kufuneka zicetyiswe ukuba zixele onke amayeza athathweyo, okubandakanya imishanguzo engaphelelwanga kunye neyeza zokuncedisa izondlo; ngakumbi i-wort yaseSt.
Isifo sokubuyiswa kwamanzi omzimba senzekile ngexesha lokuxilongwa kwe-antiretroviral. Izigulane ezithatha ukuphendula unyango zingakhuthaza impendulo yokuvuvukala kwiintsholongwane okanye izifo ezithintekayo kwaye zifuna ukuhlolwa kunye nonyango.
I-potential potential for HIV-resistance resistance among nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTI) ikhona kodwa ingazange ihlolwe ngokupheleleyo. Ukumelana nokunqamla kwamanye ama-NNRTI kulindelwe ngokulandela ukuhluleka kwe-virologic kunye ne-Etravirine ene-powder-containing containing regimen for the failure of virologic. Ukukhethwa kwee-antiretroviral agents kwi-regimen yesigulane isiguli kufuneka kwenziwe ngokucokisekileyo.
Ukusetyenziswa ngokubambisana namanye ama-antiretroviral asebenzayo aya kwandisa impendulo yokufumana unyango. Izigulane eziye zafumana ukuhluleka kwe-virologic kwi-regimen ye-NNRTI ayifanele isebenzise i-Etravirine powder kunye nucleoside / nucleotide reverse transcriptase inhibitors kuphela.
Ukhuseleko kunye nokusebenza akuzange kusungulwe kwizigulane ezingenayo unyango.
Ingqwalasela ekhethekileyo kufuneka inikezelwe ukhetho oluchanekileyo lwenkokhelo, ukubhalwa komyalelo wendlela yokulayeza imithi, ukunikezela ngolwazi, kunye nemiyalelo yokulandelela ukunciphisa umngcipheko wobugqwetha, ukugqithiswa kwempahla kunye nokungaphantsi.
I-Raw Etravirine yePowder Marketing
Ngaba i-Etravirine i-powderine i-powder Ingaba nayiphi na imiphumo yangaphandle
Kwiimeko ezinqabileyo, i-Etravirine powder ingabangela imeko ephumela ekuhleni kwezinto ezinamahlunu ezisiphako, ezikhokelela ekuphelelweni kwezintso. Biza ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba unesihlungu sentsholongwane, utyeshelo, okanye ubuthathaka ngokukodwa xa unomkhuhlane, ukhathala okungavamile kunye nomchamo omnyama omnyama.
Yeka ukuthatha i-Etravirine powder kwaye ubize ugqirha wakho kanye kanye ukuba unesiphumo esicacileyo solu hlobo:
umkhuhlane, ukubola, ubunzima bomzimba, ubuhlungu obudibeneyo okanye obunamahlunu, izilonda zomlomo, ukhathala kakhulu, okanye nayiphina impawu zentsholongwane entsha;
intlungu yesifuba, ukuva ukuphefumula;
ukuvuthwa ngaphantsi kwexesha eliqhelekileyo okanye kungabi njalo, ukuvuvukala, ukufumana isisindo esiphuthumayo;
isantya senhliziyo esiphuthumayo, ukunyuka kwesithukuthezi, ukuthuthumela, iingxaki zokulala (ukulala), ukuziva uxhala okanye unomsindo;
isifo sohudo, ukulahlekelwa kwesisindo esingachangekiyo, ukutshintsha kwexesha, ukungabi namandla, ukulahlekelwa ngumdla kwisini;
Ukuvuvukala entanyeni okanye emqaleni (i-thyroid eyandisiweyo);
ubuthathaka okanye uvakalelo olunzulu kwiminwe yakho okanye ezinzwaneni;
iingxaki ngokulinganisela okanye ukuhamba kwamehlo, ukuthetha ingxaki okanye ukugwinya;
ubuhlungu obukhulu beentlungu, ukulahleka kwesilwanyana okanye isilwanyana;
ubuhlungu besisu, ubuhlungu besisu esiswini, ukulahleka kwesidlo, umchamo omnyama, izitye ezinobumba, i-jaundice (ukuphuzila kwesikhumba okanye amehlo);
uphawu lokuqala lwaluphi na uhlobo lwenqabunga, kungakhathaliseki ukuba lubuhlungu kangakanani; okanye
ukukhupha isikhumba esinamandla - umkhuhlane, umqala, ukuvuvukala ebusweni okanye ulwimi, ukutshisa emehlweni akho, intlungu yesikhumba, elandelwa ngubomvu obomvu okanye obomvu obusasazekayo (ngokukodwa ebusweni okanye emzimbeni ophezulu) kwaye kubangele ukuphazamiseka nokukhupha.
ukuphazamiseka okanye ukuvakalelwa kwizandla okanye ezinyaweni;
ukugulisa isisu, ukuzithemba, ukuguquka kwentliziyo, umlomo owomileyo;
amaphupha angavamile; okanye
utshintsho kwindawo okanye kwindawo yeoli (ikakhulukazi kwiingalo zakho, imilenze, ubuso, intamo, amabele kunye nesibindi). "
Indlela yokuthenga i-Etravirine powder evela kwi-AASraw